KUALA LUMPUR 22 DISEMBER 2020. Tinjauan daging sejuk beku di pasaraya sekitar Kuala Lumpur. NSTP/EIZAIRI SHAMSUDIN
စင်ကာပူအာဏာပိုင်များသည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရောင်းချရန် ဟလာလ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်အဖြစ်ပြန်လည်မှတ်သားထားသော ဟလာလ်မဟုတ်သည့် အေးခဲအသားများအား စင်ကာပူဈေးကွက်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် စွပ်စွဲချက်များကို ရှာဖွေနေကြသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရောင်းဝယ်ရန်အတွက် ဟလာလ်မဟုတ်သော အေးခဲနေသည့်အသားများကို မှောင်ခိုတင်ပို့ခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းများနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ အခြေစိုက်သည့် အသားစုစုပေါင်း၏စွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာများအမြောက်အများရှိကြောင်း စင်ကာပူအစ္စလာမ်ဘာသာရေးကောင်စီ (MUIS) ကပြောကြားသည်။ အစားအစာအေဂျင်စီ (SFA) သည် အင်္ဂါနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၂၉) တွင် ပူးတွဲကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
MUIS မှ မလေးရှားအာဏာပိုင်များက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထင်မြင်ချက်ပေးရန် သို့မဟုတ် ကောလာဟလများပျံ့နှံ့ရန် ပြည်သူများကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
MUIS မှ ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် ဖြန့်ဝေနေသော သတင်းများမှာ မလေးရှားနိုင်ငံမှ အေးခဲနေသည့်အသားများကို စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်လိမ့်မည်ဟု စိုးရိမ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ MUIS သည် သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားမှအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့များမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တင်သွင်းသောအသားများကို သေချာစေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။
MUIS မှအများပြည်သူကို အာမခံသည်မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ တရားဝင်တင်သွင်းသည့် ဟလာလ်အသိအမှတ်ပြုအသားထုတ်ကုန်များကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် စားသုံးနိုင်လိမ့်မည်။ MUIS နှင့် SFA တို့ကပြည်ပရှိအသားထုတ်ကုန်များကို ၀ယ်ယူသောအခါ သတိထားရမည်ဟု စားသုံးသူများအားအကြံပြုသည်။